जनैलार्इ कानमा सिउरिनुको बैज्ञानिक कारण के ? |
प्रकाशित मिति :2017-07-26 22:37:55
यस्तै दाहिने कानका पछाडिका नसाहरु जसकाे सम्बन्ध पेटका अान्द्रासग हुन्छ । यसरी अान्द्रामा दबाब पारेर त्यसलार्इ पूरा खाेली दिन्छ । यसबाट मल विसर्जन सजिलाे भई जसबाट कब्जियत, एसीडीटी, पेट रोग, मूत्रन्द्रीय रोग, रक्तचाप, हृदय रोगसहित अन्य संक्रामक रोग लाग्न पाउँदैन। पेट सफा भयो भने शरीर र मन दुबै स्वस्थ हुन्छ । कानमाथि प्रत्येक दिन जनै राख्ने र कस्ने गर्नाले स्मरण शक्तकिो क्षय हुँदैन। यसबाट स्मृति कोष बढ्दछ। कानमा दबाव पर्नाले दिमागका ती नसाहरू सक्रिय हुन्छन् जसको सम्बन्ध स्मरण शक्तिसँग हुन्छ। वास्तवमा गल्ती गर्दा बच्चाहरूको कान निमोठ्ने कारण यही भएर नै हो । साभार :Science InfoTech
महिलाहरूले राती यस्ता काम गरे घरमा लक्ष्मीको बास हुन्छ!!
थाहा छ कस्ता चिन्ह भएका युवती भाग्यशाली हुन्छन् ?
विभिन्न धर्म सम्बन्धि जानकारी
सनातन धर्म भनेकाे के हो? जानिराखौं
नाग पञ्चमीमै जनै लगाउनुपर्ने ! कसरी भयो यस्तो ?